Laba Wado oo aad gacalisadaad Uurka Kaga ilaalin karto iyada oo aan kaniini cunin - Banaadirsom
Home Arimaha Bulshada Laba Wado oo aad gacalisadaad Uurka Kaga ilaalin karto iyada oo aan...
Laba Wado oo aad gacalisadaad Uurka Kaga ilaalin karto iyada oo aan kaniini cunin
Haddii aad tihiin lamaane aan diyaar u ahayn in gabadhu uur qaado isla markaana ka cabsi qaba isticmaalka kaniiniga, waxaa jira wadooyin kale oo gabadha uurka looga ilaalin karo. Labadaan wado ee hoos ku xusan ayaa ah kuwo quseeya ninka balse ay muhiim tahay in uu kala hadlo gabadha si isfahan uu idin dhexmaro.
Cinjirka galmada ayaa ah kan ugu amaanka badan ee uurka aad kaga ilaalin karto gabadha. Horumar weyn ayaa laga sameeyay tayada cinjirka, iyadoo kuwa hada la soo saaro ay yihiin kuwo aad u qafiif ah oo aan wax badan ka badaleyn raaxada galmada isla markaana awood leh oo aan dilaaceyn.
Kala bax biyaha ka hor
Haddii iinan dooneyn in aad isticmaashaan cinjirka, wadada kale ee kuu furan ayaa ah in aad sameyso farsamadaan, adigoo kala baxaya guska marka aad qarka u saarantahay in aad biyo baxdo. Farsadamaan waxay u baahantahay is aaminaad ka dhexeysa lamaanaha iyo ninku in uu yahay mid xakameyn kara biyo-bixiisa. Inkastoo ay leedahay xoogaa qatar ah in uu shil dhaco, balse haddii aad barato farsamadaan ayaad si weyn ugu raaxaysan kartaan galmada adiga oo aan cabsi ka qabin in gabadhu ay uur qaado.